Sheek Mohaammed Alaamuuddii
Abukaatoo Sheek Alaamuuddii
Dhaaltuun Gonfoo, Ilmi Mootii biyya Saawudii Arabiyaa – Mohammed Bin Salmaan, tarkaanfii farra malaammaltummaa biyyattii keessatti fudhatamaa jira – jedhameen, duuressicha – biliyoona hedduu – Alwaalid Nin Talaal dabalee, miseensota warra mootii, ministarootaa fi investaroota – walumaa galatti namoota 11 hidhanii jiran.
Mootiin Sawudii Arabiyaa, koreen farra malaammaltummaa cimaan dhaaltuu Gonfoo kanaan hoogganamu hundeessamuu eega labsanii sa’aatiilee xiqqoo dhaa booda, tarkaaniin hidhaa kun fudhatame.
Duuressichi daldalaan beekamaa – Sheek Mohaammed Alaamuuddii, kanneen Sanbata dabre kana hidhaman keessaa tokko ta’uu maddeen oduu sadarkaa addunyaa gabaasaa jiran. Oduu kana qulqulleeffachuuf, waahelli keenya – Tsiyoon Girmaa, Abukaatoo Sheek Alaamuuddii – Obbo Tekkaa Asfaaw-tti bilbiltee turte.
“Gama kootiin, akkuma nama biraa kanan dhaga’ee ala, ragaan na dhaqqabe hin jiru. Isaan wajjiin haga kaleessaatti telefoonaan wal-quunnamaa turre. Kaleessa wal-qunnamnee waa’ee hojii dubbannee turre. Yeroo sana waa’ee kanaa waanan hin dhaga’iiniif hin gaafanne. Waanan beeku hin qabu. Dhimma seeraa yoo ta’e qofa malee ani isaan waliin quunnamtii hin qabu. Yeroo rakkoon seeraa jiraate qofa. Yoo isaan naaf bibilan malee ani bilbilee isaan argachuuf karaa hin qabu. Oduu kana akkuma nama biraa dhaga’een jira. Garuu, kana sana jedhee qulqulleessee himuu hin danda’u – jechuun deebisan” Obbo Tekkaa Asfaaw.
Dhaabbata daldalaa Sheek Alaamuuddii “Darbaa-Midrook” jedhamuuf hoji geggeessaa ka tahan – Obbo Hayilee Asseggidee immoo akkana jedhan:
“Egaa hangi ani beeku hanguma isin beektani. Kanuma sin dhageessan kana nutis dhageenyee jirra. Si’achi qulqulleeffachuuf yaadaa jirra. Nagaatti akka jiran, haala gaariitti akka jiran ni beekna. Ka biraa illee waanan beeku hin qabu – jedhan – Hoji-geggeessa ol’aanaan Darbaa Midrook.” – Hayilee Asseggidee.
Kan ministara dhimma biyya keessaa turanii fi umuriin waggaa soddomii lamaa, dhaaltuun mootii Saawudii Arabiyaa kun – baatii Waxabajjjii dabree keessa, durbii isaanii taayitaa irraa fonqochuudhaan aangoo hoogganummaa biyyattii qabatan.
Baatii dabre keessa, godinaa daldalaa kan Teknooloojiin ammayyaa keessatti babal’atu – doolaara biliyoona dhibba shaniin ijaaruuf labsan. Saawudiin gara fuul-duraatti biyya addunyaa banaa fi biyya ammayyaa akka taatu illee hubachiisan. Baatii Waxabajjii dhufuu tii jalqabee, akka dubartoonni konkolaataa oofan kan eyyamamuuf tahuu illee beeksisan.
Xinxaltoonni akka jedhanitti, tarikaanfiin isaan amma fudhataa jiran kun, imammaata jijjiiramaa isaan oofaniif kanneen guguu ta’uu malan karaa irraa kaasuuf – jedhama.
Hidhamuu Alamuuddiin Laalchisee Abukatoo Isaanii " Dhagahe malee ragaa na dhaqqabe hin jiru" jedha